​Guddiga qaban-qaabada doorashada Madaxweynaha oo lagu dhawaaqay, Cabdi Xaashi oo jeediyay khudbad cajiib ah
​Guddiga qaban-qaabada doorashada oo la magacaabey, gudoomiyaha aqalka sare oo hadlay
MUQDISHU, Somalia- Barlamanka labada Aqal ee Somalia, ayaa maanta kullankoodii ugu horeeyay ee wada jir ah ku yeeshay magaalada Muqdishu, kaasoo ay uga doodeen arrimo ku saabsan xaaladda dalka iyo doorashada Madaxweynaha.
Xildhibaanada ayaa dood dheer kadib isku raacay qodobo ay kamid yihiin;
In la sameeyo guddi madaxbannaan oo ka hortaga waxyaabaha la xariira musuqmaasuqa baahsan ee dalka Somalia ka jira mudada dheer
Ciidamada sugaya amniga inay si toos ah u hoos tagaan guddoonka golaha shacbiga Somalia
In lacagaha ka soo xaroota musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Somalia lagu bxiyo wax ka qabashada xaaladda abaaraha ka jirta dalka
In Musharixiinta u taaga xilka madaxweynaha la weydiiyo su’aalo u dhigan hab dood wadaag ah oo wax laga weydiinayo wax qabadkiisa
Labada aqal ayaa isku afgartay in tirada gudiga doorashada laga dhigo 16 xubnood oo 10 ka mid ah ka imanayaan gollaha shacabka halka 6 xubnood ee kale laga soo xulayo aqalka sare.
10 kamid ah mudanayaashaas ayaa lagasoo xulay aqalka hoose halka Lixda kale yihiin mudanayaal katirsan Aqalka Sare Somalia.
Dhinaca kale Guddoomiyaha Aqalka sare Somalia Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa jeediyay khudbad ku fadhiday qiimo weyn oo ka hadlay xaaladda dalka, wuxuuna soo jeediyay in laga fogaado qabiilka oo loo istaago qaranimada waddanka.
Mudane Xaashi, ayaa ku nuux nuuxsaday arrimaha dib u dhigay dalka inay yihiin waxyaabaha ku salaysan qabiilka iyo danta gaarka ah, wuxuuna taa badalkeeda soo jeediyay in dhammaan Xildhibaanada labada aqal noqdaan Adeegayaal qaran.
Wuxuu ku baaqay in laga wada shaqeeyo midnimada oo laga fogaado is-qabqabsi mudada ay xilka hayaan isagoo soo jeediyay inay noqdaan dadkii Somalia u yeeli lahaa waji kale oo wanaagsan.
Kulankan ayaa kusoo beegmaya xilli la filayo in maalmaha soo socda lagu dhawaaqo waqtiga rasmiga ah ee la qabanayo doorashada Madaxweynaha, waxaana caasumadda dalka ka socda loollan xoog leh oo ku qotoma helista xilka Madaxweynaha oo ay u taaganyihiin murashaxiin kala duwan.
​Jubbaland oo dooratay Xildhibaankii ugu dambeeyay Aqalka Hoose
KISMAYO, Somalia- Maamulka Jubbaland ayaa maanta oo Khamiis ah soo afjaray Doorashadii aqalka hoose, oo 08, 2016 ka billaabatay gudaha magaalada Kismaayo, ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Ibraahim Maxa'ed Xuseen, ayaa noqday Xildhibaankii ugu dambeeyay oo lag ...
​Xildhibaan hore oo Musuq-maasuq ku eedeeyay Gaas iyo Xasan Sheekh [Dhagayso]
​Jawaari iyo Xidig oo kusoo baxay Aqalka hoose, doorashooyin socda
​Puntland: Guddiga khilaafaadka oo joojiyay Ergooyin loo yeeray
​Puntland: Guddiga doorashooyinka dadban oo ka hadlay soo xulista Aqalka hoose [Dhagayso]
Siyaasadda maamulka Koonfur Galbeed oo murugsan
​Khudbadda Murashax Farole kahor jeediyay Xildhibaanada Somalia